यसकारण बाबुराम भट्टराई गरिबका पक्षमा हुनुहुन्न ! - Everest Dainik - News from Nepal
यसकारण बाबुराम भट्टराई गरिबका पक्षमा हुनुहुन्न !
निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको अन्त्य गरेर हामी व्यावसायिक खेती तिर लाग्नुपर्दछ । यो बेला अलि कति साग, अलिकति मुला,चम्सुर, सुप, बकुल्ला, धनियाँ, गोलभेंडा वा अन्य जातका तरकारी, सागसब्जी उब्जाएर दिन कटाउने समय होइन । यो त ठूला ठूला फारमहरु खोलेर व्यावसायिक खेती गर्ने बेला हो । घरमा एउटा भैंसी, एउटा गाई पालन गर्ने होइन । फारमनै खोलेर गाई भैंसी पाल्नुपर्दछ । यसका लागि हाम्रो पार्टी यहाँहरुको साथ छ । हामी सहयोग गर्दछौं ।
गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा अव बाबुराम भट्टराई आईसकेपछि केही हुन्छ । गोलाकार भित्रको हँसिया हथौडामा भोट दिएर हामीलाई जिताउनुहोस् । (रेकर्डबाट)” यो भनाई तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पालुङटार स्थित भवानीमा.वि. नजिक रहेको चौतारामा बसेर भनिरहँदा साँच्चै गोरखा समृद्ध हुन्छभन्नेमा गोरखावासी विश्वस्त थिए । २्र०६४ साल चैत २८ गते निर्वाचन भयोउहाँ धेरै मत ल्याएर विजयी हुनुभयो । बाबुरामको योजना अनुसार गोरखाको देउराली, आरुटारमा गाईफारम खोलियो,भुसुण्डे खोलामा माछा फारम खोलियो, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय र कृषि विकास कार्यालयबाट साना किसानहरुले पाउँदै आएका सिंगोटुक्रे योजनालाईफारम खोल्ने नाममा त्यही फारमहरुमा लगानी गर्न लगाईयो । समग्र किसानकोलागि ल्याएका योजनाहरु केही फारममा सिमित भए ।
बाबुरामले गोरखाको मध्य भाग भए बग्ने दरौंदी नदि जिल्लावासीलाई थाहैनदिएर विक्री गरेका छन् । यहाँ सञ्चालन हुने जलविद्युत योजनामा गोरखावासीले शेयर लगानी गर्न पाएका छैनन् ।
फलत यहीँबाट गोरखामा माओवादीमा दुई धार देखिन थाल्यो ।एउटा धार कर्मचारीतन्त्रलाई मिलाएर सहकारीका नामबाट योजना ल्याएर चल्न थाल्यो भने अर्को धार बास्तविक किसानका आवश्यकता पूरा गर्ने बजेट लिनुहुँदेन भन्ने पक्षमा देखियो । हाम्रा अर्थमन्त्रीले उठाएको कर हो भन्दै योजना माग्ने क्रम आधा दशक सम्म रह्यो । यसले गोरखाको माओवादीलाई चोइट्याइदियो । योजनाहरु माओवादीका सहकारीले हडप्न थालेपछि आफ्न पाखा पखेरामा खेती गरेर बसेका युवाहरु आश मारेर विदेश जाने क्रम बढ्यो । यसरी नेताको नजिकको मान्छे म हो भन्दै विदेश पठाउने क्रम बढ्यो, त्यतिबेलाका अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनका गोरखा अध्यक्ष र वाइसियल नेपालका जिल्ला अध्यक्ष युवाहरुलाई विदेश पठाएर कमिसन खाने गरेका थिए । म आफैले पनि उहाँहरुलाई यो खाडीमाआउन कमिसन दिएको छु । आज उहाँहरु कता हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन । पार्टीले थाहा पाएपछि उनीहरु आफुहरु बाबुराम विचार धारको भनि सुरक्षित भएका थिए रे । हजारौंका संख्यामा युवाहरु विदेश पलायन भएपछि गाउँमा रहेका
खेती योग्य जमिन बाँझै रहे । बुहारीहरु शहर झरे , गाउँमा बुढाबुढी मात्रभए । यसका कारण नीति तथा नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्दछ की पर्दैन ? । थोरैखेती गरेर घरमा बाबु आमा पालेर बसेका युवाहरुलाई फर्म खोल्नुपर्दछ भनेर उत्साह दिए जस्तो गरी विदेश जान बाध्य पार्ने नेपालका नेता डा. बाबुरामभट्टराई हुन् । गाउँ गाउँमा सहकारी घरघरमा भकारी नाराले कति काम गरे ?आफ्नो विचार गाउँ गाउँमा लाद्नका लागि बाबुरामले सहकारी खोल्ने नाराचलाएका थिए भन्ने यतिबेला सावित भएको छ । खै गाउँका सस्तो सहकारीहरु ?आफु मातहत चल्ने समिति बने बजेट दिने नबने नदिने प्रवृति बाबुराममा थियो। यहाँका सचेत बामपन्थीहरुले सहकारीबाट जिल्ला कब्जा गर्ने बाबुरामकोनयाँ तरिकालाई सफल हुन दिएनन् । निर्वाचित भएपछि प्रत्येक महिना गोरखा आउने बचनबद्धता बाबुरामले गर्नुभएको थियो । भ्याएसम्म आउने नभ्याए धादिङको सिमाना घ्याल्चोक सम्मआएर भनेपनि फर्कने गर्नुभएको थियो । बाबुराम जिल्लामा आउनु राम्रो हो उहाँ आउँदा जाँदाको खर्च व्यवस्थापन गर्न पार्टीलाई चुनौती थियो ।
निर्वाहमुखि खेती प्रणालीबाट विस्तारै व्यवसायिक प्रणाली बनाउँदै देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने र विदेशबाट आउने चामल रोकेर नेपाली रुपैयाँ स्वदेशमै राख्नका लागि पनि बाम गठबन्धनका जित अनिवार्य छ ।
सहकारीका आम्दानी पार्टी भित्रकै एक दुई जनाले परिचालन गर्ने पार्टीमाआएका नेता तथा पाहुनाहरुलाई स्वागत गर्दा मासिक खर्च बढेको बढ्यै । अर्थ मन्त्री पछि बाबुराम प्रधानमन्त्री हुनु भयो । जिल्लामा काम गरेर गएका पार्टीको क्षेत्रमा जिम्मा हुँदा भ्रष्टचारमा परेका मानिसहरु , बलत्कार मुद्धामा अल्झिएकाहरु पुनः बाबुराम धारमा पुग्नु भएछ । बाबुराम अर्थ मन्त्री हुँदा प्रचण्डको निर्देशनमा गोरखामा धेरै योजनाहरु आए । तिनै योजनाहरुको काम देखाउँदै यतिबेला बाबुराम गाउँमा भोट मागिरहनु भएको कुरा सु्नेको छु । उहाँ बाम गठबन्धनबाटै उठ्नु भएको छ भने त भोट माग्न सुहाउँछ यदि होइन भने त लाज लाग्नुपर्ने हो विद्वान मान्छेलाई । सबैथोक गर्छु भनेर तत्कालिन गोरखा दुईबाट चुनाव जिेतका बाबुराम ०७० मा गोरखा १ मा सुरक्षित अवतरण गर्नुभयो । उहाँको प्रतिवद्धता बमोजिम काम नभएपछि गोरखाको इलाका नं. ७ र ८ मा पार्टीको जनआधार कमजोर थियो । फेरी त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट उठ्दा बाबुराम पराजय हुने निश्चित थियो ।त्यसैले बलियो संगठन र प्रशासनिक क्षेत्रपनि यसै स्थानमा भएकाले गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ रोजेर उठ्नुभयो र जित्नुभयो ।
याे पनि पढ्नुस देउवाको जित, दाहालको भुमिका आश्चर्यजनक : बाबुराम
चुनाव जितेपछि संविधानसभाबाट संविधान बनाउन ठूलो भूमिका खेल्नुभयो । संविधान घोषणा भएपछि आफैले बनाएको संविधान जलाउनुभयो । संसदबाट राजीनामा गर्नुभयो र नयाँ पार्टी खोल्नुभयो । गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का जनतालाईबाबुरामले आँखामा दिउँसै खुसार्नीको धुलो हालेर जानुभयो । फेरी देव्रेआँखा देखाउँदै भोट माग्न आई राख्नु भएको छ, विद्वानलाई के लाजशर्म ? बाबुराम अर्थमन्त्री भएपछिको पछिल्लो समयमा उहाँ जिल्ला विकासको परिषद उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले आफू भीमसेन थापा झै आत्महत्या गर्न तयार रहेको समेत बताउनुभयो । उहाँको यो भनाइपछि जिल्लामा बाबुरामलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कमजोर हुँदै गएको थियो ।
मैले यो सत्य कुरा लेखिरहँदा आज पार्टी भित्र रहेर राजनीति गरेको दुई दशक वितेको छ । गोरु पाल्न सकिएन एउटा हाते ट्याक्टर किन्देउ २५ हजार पर्दछ भनेर बुवाले भन्नु भएको धेरैसमय भैसक्यो मैले सकेको छैन ।
ठेक्का पट्टामा गुण्डागर्दी उनकै जिल्ला पार्टी अध्यक्ष अग्रपंक्तिमा छन् । पछिल्लो राजनैतिक समिकरणले उहाँलाई ठाउँ दिएपनि तिन दिन भित्र निर्णय फेर्नु भएका बाबुराम यतिबेला माओवादी देखे म पनि माओवादी भन्ने, काँग्रेस भेटे म पुरानो काँग्रेस अवको प्रधानमन्त्री र काँग्रेसको पार्टी सभापतिको दौडमा रहेको व्यक्ति भन्ने प्रवृति बढेको छ ।
याे पनि पढ्नुस चुनावपछि बाबुराम र नारायणकाजीले बल्ल संगै फिल्म हेरे
बामलोकतान्त्रिक विचार कहिँ दुनियाँमा नभएको नयाँ विचार त हो तर यसले यहि गर्नुपर्छ भन्ने छैन आफूलाई जसरी फाईदा हुन्छ त्यहि गर्ने भन्ने देखिएको छ । क्षेत्र नं. २ को प्रदेश १ मा उठाइएका आँखोमा भोट दिनुपर्ने उम्मेदवारी वापती लागेका र आर्थिक भ्रष्टचार गरेर माओवादी छाडेका मानिस हुन् । बाबुराम जस्तो मानिसले यस्ता मान्छे बोकेरहिँड्न कसरी सुहाउँछ ? एउटा दलितकी छोरीसंग पारपाचुके गरेपछि उहाँलाईपार्टीले विवाह गरिदिएको थियो । काठमाण्डौ तमुवान गणतान्त्रिक मञ्चको अध्यक्ष हुँदा चन्दा संकलनको हिसाव देखाउन आलटाल गरेर उहाँ बाबुराम विचारधारमा लाग्नु भएको थियो । उहाँको परिवारमा भाउजु काण्ड गाउँमा निक्कै चर्चामा रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने बाबुरामको नाम बाहिरबाटसुनेका र दैनिक जीवन व्यवहारमा नभोगेकाहरुले भोट दिनसक्छन् ।
त्यहि नै भोटले उहाँको विजययात्राको मत बन्ने देखिदैन बरु धरौटी जोगाउन सहयोग गर्न सक्छ । देशमा भूकम्प नगएको भए बाबुरामको पार्टी फस्टाउने थिएन । भूकम्पका समयमा आएका राहत समाग्रीहरु छलछाम गरेर वितरण गर्दै अभावमा रहेका माओवादी कार्यकर्ताहरुलाई बाबुरामले आफ्नो बनाएका थिए । नारायणकाजी श्रेष्ठ(प्रकाश) लाई जिल्ला नआएको , विकास नगरेको भन्ने आरोपबाबुरामकै मुखबाट सुन्न पाईन्छ । बाबुराम भन्दा नारायणकाजी दुईगुणा पटकगोरखा आउनुभएको छ ।
उहाँ सहभागि भएका स्थानका कार्यक्रमहरुमा धेरथोर बजेट समेत आउने गरेको थियो । एउटा प्राथमिक विद्यालयको रजत जयन्ती उद्घाटनकालागि बोलाएको विद्यालयमा कहिल्यै नपरेको बजेट पर्दा त्यहाँको समाज जिल्लापरेको थियो घ्याल्चोकमा । नारायणकाजीको लगानी गोरखामा बाबुरामको भन्दा कैयौं गुणा बढी छ । बाबुराम मिडियामा मैले गरेको हो, मैले गर्छु भन्नुहुन्छ । नारायणकाजी भित्र भित्र काम गर्नुहुन्छ । गोरखाबासीले यतिबेलानारायणकाजीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा समेत हेरेका छन् ।
किन दिन्छन् नारायाणकाजीलाई भोट ?
(१) गोरखा जिल्लाले स्थिर सरकारको जिम्मेवार व्यक्ति पाउने चानचुने कुरा होइन । नारायणकाजी हाइ पोस्टमा रहने र त्यसलाई जिल्लाको समग्र विकासमा योगदान पुग्ने कुरामा गोरखावासी ढुक्क छन् ।
(२) बामपन्थी आन्दोलनमा नारायणकाजी अटल छन् ।
(३) गोरखा कम्युनिष्टहरुको किल्ला हो भन्ने साख राख्न ।
(४) स्थिर सरकार निर्माण गरी सम्मुन्नत र समृद्ध गोरखा निर्माण गर्न ।
(५) बाबुरामलाई दिए व्यक्तिगत नारायणकाजीलाई दिए संस्थागत । संस्था
बलियो भयो भने व्यक्ति बलियो हुन्छ । व्यक्ति बलियो हुँदा अराजकता
(६) बाबुरामले गोरखाको मध्य भाग भए बग्ने दरौंदी नदि जिल्लावासीलाई थाहैनदिएर विक्री गरेका छन् । यहाँ सञ्चालन हुने जलविद्युत योजनामा गोरखावासीले शेयर लगानी गर्न पाएका छैनन् । बाबुरामका केही कार्यकर्ताहरुले जागिर पाएपनि अन्तत बाबुरामले गोरखाबासीलाई ठगी गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस नयाँ शक्ति र विवेकशील साझा मिल्नुपर्छ : बाबुराम भट्टराई (भिडियो सहित)
(७) बुढीगण्डकी जलविद्युत योजना लागु हुनेभएपछि जग्गा दलालहरु प्रयोग गरी धेरै जग्गा दलालका नाममा बनाई मुअब्जा बढाउन बाबुरामको निर्देशनमा आयोजनास्थलमा कार्यालय नै तोडफोड भएको छ । मुअब्जा पाउनेहरुलाई यहाँको विकास हेर्न त्यहि स्थानमा राख्नुको अलवा अन्यत्र लखेटेर त्यहाँ नयाँ बस्ती बसाल्न बाबुराम उद्धत छन् । यो कुरा थाहा पाएका त्यस क्षेत्रका नागरिकहरु बाबुरामको पक्षमा छैनन् ।
यति भनिरहँदा बाबुराम जस्ता विद्वान मानिसलाई हामीले गाली गर्नु हुँदैन । उहाँको प्रवृति खराव छ भने उहाँको पछि लाग्नु हामी गोरखावासीको बाध्यताहुँदैन । गोरखाको विकास बाबुरामले गरेका होइनन् यो सरकारी कार्यक्रम हो ।उहाँले आफ्नालाई ठेक्का पार्न दवाव दिने र श्रीमती लगाएर कमिसन उठाईकेहीलाई हात लिएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने गर्नुभएको हो । नेपाली काँग्रेस,राप्रपा लगायका दलहरुले बाबुरामलाई समर्थन गर्नुमा अन्य स्थानमा नयाँशक्तिका भोटले उनीहरु पनि विजय बन्नु छ ।
बाबुरामले जितेपनि नारायणकाजीले जितेपनि ति पार्टीहरुलाई केही भिन्नता हुँदैन । बाबुरामले दिने एकदुईकार्टुन वियर र केही पैसामा आजका युवाहरु विक्छन जस्तो मलाई लाग्दैन ।जीवनभरी कमाई गर्नेहरु एउटा ओत लाग्ने ठाउँ बनाएर बस्न सकस छ । बाबुरामकामान्छे हुँ भन्नेहरु केही काम गरेको देखिदैन आँखै अगाडि टोपी खस्ने महल बनाएर बसेका छन् । बाबुरामको समृद्धि नारामा सिमित हुने हो । बाबुरामलेजिते भने गोरखालीले त दुख पाउँछन नै तर सिंगो देश भुमरीमा पर्दछ ।
उनी निर्वाहमुखि खेती प्रणाली, साना तथा मझौला उद्योगका विरोधी हुन् । ठूला आश्वासन देखाउने र बाध्यकारी बनाएर विदेश पठाउने त्यसबाट कार्यकर्तापंक्तीले कमिसन लिने र देश सञ्चालन गर्नेले रेमिट्यान्सबाट लाभ लिने चरित्र अहिलेसम्म देखिएको छ । यो बाबुरामले बनाएको नीति हो । नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था हेर्दा यहाँको विकास लागि बाबुरामको विचार अनुसारका योजनाहरु काम लाग्दैनन् ।
मैले यो सत्य कुरा लेखिरहँदा आज पार्टी भित्र रहेर राजनीति गरेको दुई दशक वितेको छ । गोरु पाल्न सकिएन एउटा हाते ट्याक्टर किन्देउ २५ हजार पर्दछ भनेर बुवाले भन्नु भएको धेरैसमय भैसक्यो मैले सकेको छैन । बाबुरामले निर्वाहमुखी खेती बन्द गर्नुस नभनेको भए आज मैले सुप, चम्सुर, धनियो देखि सबै सामग्री विदेशकै प्रयोगगर्नुपर्ने थिएन । आफूलाई चाहिने आफै उत्पादन आफैले गर्दथ्यें , केही विक्री गरी त्यसैबाट मैले हाते ट्याक्टर किन्न सक्थें ।
निर्वाहमुखि खेती प्रणालीबाट विस्तारै व्यवसायिक प्रणाली बनाउँदै देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने र विदेशबाट आउने चामल रोकेर नेपाली रुपैयाँ स्वदेशमै राख्नका लागि पनि बाम गठबन्धनका जित अनिवार्य छ । आजको युगमा बाबुराम विचार, बाबुराम शैली प्रयोग हुन सक्दैन । यदि प्रयोग भईहाल्यो भने कैयौं वर्ष हामीहरुले दुख झेल्नुपर्दछ । गरिबका पक्षमा नरहेका बाबुरामलाई यो गोरखावासीले बाहिर राख्दछन् ।
ट्याग्स: baburam bhattara